I-Hailed njenge "Toy of the Century", izitena ze-Lego zeplastiki ezenza i-Lego System of Play zenzelwe ngu-Ole Kirk Christiansen, umyili wezinto ezibonakalayo kunye nendodana yakhe, u-Godtfred Kirk. Kusuka kule trick ezincinci zokungena, ezinokudibaniswa ukuhlanganisa inani elingapheliyo loyilo, i-Lego iye yavela kwiqumrhu elikhulu emhlabeni wonke elenza amathoyizi kunye namafilimu kwaye iqhuba iipaki zemixholo.
Kodwa ngaphambi kwayo yonke into, i-Lego yaqala njengorhwebo lokuchwela kwidolophana yaseBillund, eDenmark ngo-1932.
Nangona waqala ukwenza i-stepladders kunye neebhodi ze-ironing , amathoyizi enkuni waba ngumkhiqizo ophumelele kakhulu kaCrisiansen.
Inkampani yamkela igama elithi LEGO ngo-1934. I-LEGO yenziwa ngamazwi aseDenmark athi "LEG GOdt" okuthetha ukuba "udlala kakuhle". Ngokufanelekileyo, inkampani kamva yafunda ukuba ngesiLatini, "i-lego" ithetha ukuba "ndibeka ndawonye."
Ngomnyaka we-1947, inkampani yeLego yowokuqala eDenmark ukusebenzisa umatshini wokufakelwa kwiplastiki ekwenzeni amathoyizi. Oku kwavumela ukuba inkampani ikhiqize izitena ze-Automatic Binding Bricks, ezenziwe ngo-1949. Ezizitena ezinkulu, ezithengiswa kuphela eDenmark, zasebenzisa inkqubo yokudibanisa i-stud-and-tube eyayiyi-forerunner yezitena ze Lego.
Kwiminyaka emihlanu kamva, ngo-1954, izixhobo ezihlaziywa kwakhona zabizwa ngokuthi "LEGO Mursten" okanye "i-LEGO Bricks" kwaye igama elithi LEGO libhaliswe ngokusemthethweni njengegosa eDenmark, ebeka inkampani ukuba iqalise "i-LEGO System Play" kunye neeseti ezingama-28 8 izithuthi.
Inkqubo yokubambisana ye-LEGO yangoku kunye ne-tube ithokhiswa ngamalungelo ngonyaka ka-1958 (i-Patent # 92683). Umgaqo omtsha wokudibanisa wenza iimodeli zizinzile ngakumbi.
Namhlanje iLebhu yenye yeenkampani ezinkulu zokuzikhwela emhlabeni jikelele, ezinomqondiso omncinci wokunciphisa. Kwaye i-brand ye-LEGO ihambe ngaphaya kwamathoyizi eplastiki: ezininzi zeemidlalo zevidiyo ezisekelwe kwi-LEGO zikhutshwe, kwaye ngo-2014 zaqala ukuvakalisa ngokukhawuleza.
René Laennec kunye neNtshutshiso yeStethoscope
Inkolelo-ntetho: Ukungabikho kobuxoki akuhambelani ne-Free Will and Choice Morality
Ubukhosi baseRoma: iMfazwe yaseMilvian Bridge
I-Virginia Military Institute GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
"Hark! Iingelosi ze-Herald Zimba" ngabaculi bamaKristu kunye neeVangeli
AbaPhambili beePatenti ezingama-25 ezifanelekileyo kwi-Now
Ukuhambela Isikhokelo De Dinan isiFrentshi Xhosa Side Side Side Story
Iimoto zeDinosaur zezingane
Ukusebenzisa i-Leyland Cypress Tree kwi-Landscape yakho
Ukunyuka kweGrey Peak: I-Colorado IVoteener
Imbali yePetonghua kunye nokuSebenzisa kwayo namhlanje